टेकु अस्पतालका डा.पुन भन्छन्ः अब पनि हे’लचक्र्याइँ गर्‍याैँ भने हामीले भोग्ने इटालीकै अवस्था हो ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/टेकु अस्पतालका डा.पुन भन्छन्ः अब पनि हे’लचक्र्याइँ गर्‍याैँ भने हामीले भोग्ने इटालीकै अवस्था हो !
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रो’ग अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले को’रोना भाइरसको संक्रमण ग’म्भीर अवस्थाको संकेत गरेको बताएका छन् ।कैलालीमा कोरोना संक्रमित एक व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई पनि संक्रमण सरेको पुष्टि भएपछि यो म’हामारी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो ।उनले भने अहिले यो संक्रमण स्थानीय व्यक्तिमा सरेको छ। जसलाई सेकेन्ड स्टेज (दोस्रो चरण) भन्छौं हामी। यो सम्भावना मैले पहिले देखेको थिएँ र भनेको पनि थिएँ- विदेशबाट भित्रिनेको व्यापक निगरानी गरौं र एक/एकलाई क्वारेन्टिनमा राखेर नमुना परीक्षण गरौं।